नेकपा फुटको संघारमा रहेको बेला ओली समुहलाई देउवाले दिए यस्तो जवाफ - Media Dabali
शुक्रवार, माघ १४ २०७८Jan 28 2022
अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पद गौतमको हातमा, फागुन २० पछि खतर्नाक खेल हुदै !
गोहिर खान प्रकरण : पाकिस्तान अधिकारीले हत्याको सुपारीको भुक्तानी बैंकबाट गरेको खुलासा
चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विराटनगरमा राष्ट्रिय एकता अभियान नेपालले गर्यो प्रदर्शन
झन्डै पत्तासाफ भएपछि पनि शंकर पोखरेल किन ढाँट्दैछन् एमालेको बहुमत आउँछ भनेर ?
प्रचण्डलाई सजिलो छैन महासचिव छान्न, वर्षमान र जनार्दनमध्ये को बलियो ?
राष्ट्रिय सभामा कांग्रेसका ६ सांसद विजयी, एमालेलाई अर्को धक्का
आज राष्ट्रिय सभा निर्वाचन : एमालेले गुमाउँदैछ आठ सिट
चिनियाँ अधिकारीहरुद्वारा दुई तिब्बती भिक्षु पक्राउ
# गंगा चौधरी
# सुनिलबावु श्रेष्ठ
आइतवार, आषाढ २१ २०७७
काठमाडौं - सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) फुटको संघारमा रहेपछि प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाफ्नो चहलपहल बढाएका छन् । पार्टी फुटे पनि सत्ता टिकाउन ओलीले जस्ता सुकै रणनीति अपनाउँन सक्ने स्थिती सिर्जना भएको छ ।
यसै क्र्रममा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग केहिदिन अघि गोप्य छलफल गरेका थिए । त्यसपछि आज (आइतबार) बिहान पनि नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई देउवासँग भेट गराउन बुढानिलकण्ठ पठाएका थिए ।
ओलीले दुतका रुपमा नेम्वाङलाई पठाएका थिए । आफू इतर समूहले चाल्न सक्ने सम्भावित कदमको पूर्वानुमान गरेर सभापति देउवासँगको छलफललाई तिव्रता दिएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार पार्टी फुटे कांग्रेससँग सहकार्य गरेर आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा कायम राख्न ओलीले कथमकदाचित सभापति देउवासँग हिमचिम बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
देउवासँग हिमचिम बढाउन खोजेपछि कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा देउवालाई प्रश्न गरिएको थियो । यद्यपी देवाले सत्ता साझेदारीका विषयमा अहिलेसम्म छलफल नभएको बताएका छन् ।
त्यस्तै आइतबार नेम्वाङसँग भएको भेटमा नेम्वाङले “आफूहरु कांग्रेससँग मिलेर अगाडि बढ्न सधैँ तयार रहेको कुराहरु राखे”को स्रोतले जनाएको छ । “जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले जिम्मेवार भूमिका कांग्रेसले खेलोस् भन्ने नेम्वाङको आशय” रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
यद्यपी कांग्रेस सभापति देउवा भने ओलीलाई सघाउनकै लागि सरकारमा नजाने संकेत गरेको बताइएको छ । तर, नेतृत्व गर्ने मौका काँग्रेलाई दिइए जान पनि सकिने स्रोतको भनाइ छ । “ओलीलाई सघाउनकै लागि सेकेन्ड भएर कांग्रेस सरकारमा गइदैन् तर नेतृत्व कांग्रेसले गर्न पायो भने जान सक्छ र जानु पनि पर्छ ।” ससभापतीको आशयलाई उदृत गर्दै स्रोतले बतयो ।
कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग
शुक्रवार, बैशाख २६ २०७७०१:४८:०८
# केपी ओली # नेपाली कांग्रेस
बाहिरियो प्रेम आलेको कर्तुत, मन्त्रीको ठाडो आदेशमा लुम्बिनीभित्र रिसोर्ट
कति छ माओवादी नेता वर्षमान पुनसँग सम्पत्ति ? चार्टर्ड प्लेन लिएर चीनबाट फर्किंदै
सेलिब्रेटी कम्युनिस्ट सांसदको घाँटीमा एककिलो सुन, कसले दियो ?
निर्वाचन आयोगको तमासा, एमालेलाई मालामाल, राप्रपामा तनाब
एमालेका निर्वाचित शक्तिशाली नेता सहितको टोली कांग्रेसमा प्रवेश, श्रेष्ठले गरे भब्य स्वागत
फेरि गौर नरसंहार काण्ड दोहोर्याउने धम्की दिने रेणुको मन्त्री पद धरापमा, प्रधानमन्त्रीले एक्सन लिने